Igbe onyinye, Akwụkwọ ịde ihe, akwụkwọ mmado Tattoo - Yuxingyuan
Njikere isoro gịiji mepụta echi ka mma.
Shenzhen Yuxingyuan Onyinye Packaging Co., Ltd. bụ ọkachamara obibi akwụkwọ na nkwakọ enterprise tụnyere imewe, obibi akwụkwọ na post-nhazi. Ọkachamara na-ebipụta ụdị igbe nkwakọ ngwaahịa ọ bụla, igbe agba, igbe kaadị, kaadị agba, akwụkwọ mgbasa ozi, mkpado, akwụkwọ ntuziaka, akpa akwụkwọ, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ọkwa, akwụkwọ mmado, akara ọba, igbe ọla, igbe boutique…
Iji nye ndị ahịa ezigbo obibi akwụkwọ na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na ọrụ.
Pụrụ iche noodles na bowknot atọkwa pa ...
Igbe onyinye dị mfe Ọrụ igbe igbe dị mma, ọdịdị pụrụ iche nke nwere ike ịgbanye ihe, ihe ...
ahaziri nkọwa, ahaziri mara mma ...
Akwụkwọ mmado tattoo tattoo Aicetiks mmado na-enye gị obere mma na ndụ gị nkịtị. ...
Cover ụkpụrụ customization nkọwapụta custo ...
Udiri akwukwo akwukwo akwukwo akwukwo akwukwo akwukwo akwukwo akwukwo: Nke mbu, odidi nke pape ...
Akwụkwọ ndekọ azụmahịa a dị elu nwere ọdịdị dị elu na ọdịdị dị ala na-enweghị ida ...
The ụlọ ọrụ mgbe niile na-ewe mmepe nke a elu-tech oge a na-ebi akwụkwọ enterprise dị ka ya mmepe direction, na-eso ije ije na oge, na-agbaso na nke ugbu a na-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ ozi na ọnọdụ.
Anyị merela agadi ebi akwụkwọ na ngwá ọrụ ọkachamara oru.
Styledị ngwaahịa ahụ bara ọgaranya, n'ezie nwere ike imeju ọchịchọ gị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ, anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ ịjikọ gị.
Ndị egbugbu a ga-ahọrọ akara mmado?？ Onye ọ bụla maara okwu egbugbu ahụ, nri? N'oge ugbu a, n'anya ọtụtụ mmadụ, a ga-ahụta onye ọ bụla nwere egbugbu n'ahụ ya dị ka onye na-elekọta mmadụ. Ọtụtụ ndị ...
Kedu ihe bụ usoro mmepe ọhụụ nke ngwaahịa agụmakwụkwọ
Gịnị bụ ọhụrụ mmepe direction nke sọọsọ ngwaahịa? N'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ ndị mmadụ, ọchịchọ ndị ahịa maka ngwaahịa ụlọ amụbaala, nke mekwara ka ndị na-eweta ngwa ahịa na ...
Na-ejere ndị ahịa ọ bụla ozi nke ọma.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ agbasoro na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "ihe ọhụrụ, arụmọrụ, mma, ọrụ".